Unoita Ruvara Impact Pamhepo Kutenga Maitiro? | Martech Zone
Unoita Ruvara Impact Pamhepo Kutenga Maitiro?
NeChishanu, Gunyana 17, 2010 NeChishanu, Gunyana 6, 2013 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti
Heino chinonakidza infographic kubva kuKISSmetrics paruvara uye zvazvinoita pakutenga sarudzo. Kuchengeta izvi mupfungwa, zvakatumirwa naNick munguva pfupi yapfuura kushandisa makuki kupa ruzivo rwakasiyana kumushanyi pane kuti mutengi agone kuuya… pamwe saiti yako inogona kuchinja machira uye kutama kubva kune yakasviba dhizaini (dhizaini) kuenda kune yepingi dhizaini ... kana kana iwe uchimhanyisa yakasarudzika, bhuruu dhizaini!
Tags: nhemaruvara rwebhuruushavacantaloupe.tvruvarakomesiecommerceemail vhidhiyofreshnessjon digregoryorenjimaitiro ekutengatsvukusocial media advertisingmagariro reactorkusvika chaikovhidhiyo kubatanidzwa
Zvinhu gumi Zvakasuwa Sangano Rako Rinoenderera Kukuvadza Bhizinesi Rako
Sep 17, 2010 pa 9: 40 AM
Izvi zvinonakidza chaizvo!
Sep 17, 2010 na2: 35 PM
Uku kutsvaga kunotyisa… ndanga ndichifunga kumhanyisa kutengesa kwakakurumidza kune vangu "mubhajeti" vatengi. Uye ikozvino ndinoziva kuti ndeapi mavara ekushandisa!
Thanks murume! Zvangu zvese kune iyo "Yakanaka" Manning (iwe unoziva, iyo iri CHAIYO QB!) 😉
Mbudzi 9, 2011 na7: 01 PM
Inonyanya kubatsira. Ini ndaingofunga izvo pandakanga ndichigadzira bhuku rekuvhara rimwe zuva. Kutenda nekugovana!
Mbudzi 9, 2011 na7: 34 PM
Iwe unotengesa, Grey!
Nov 14, 2011 pa10: 09AM
Mbudzi 14, 2011 na4: 59 PM
Yakanaka post positi Douglas, yako inforgraphic inopa yakanaka rejista chishandiso. Ini ndinoda psychology yemavara uye yavo pesheni mukushambadzira. Paunenge uchienda kuburikidza nekutsanangurwa kwako kwemavara, hazvina kuoma kukurumidza kuyeuka mienzaniso inotsigira imwe neimwe kumusoro.